Hordhac Dhalo Haydarooliga Caadiga ah oo ku saabsan EPONT JACK
Dhalada Haydarooliga caadiga ah.
Ma jirto wax diidmo ah in badeecadani ay saameyn togan ku leedahay niyadda waxayna bixisaa nasasho, gaar ahaan hurdo la'aanta iyo madax xanuunka.
Alaabtu waxay leedahay tayada dusha sare ee weyn. Burburinta dusha sare ma noqon doonto mid si fudud u nugul xirashada sida dildilaaca, godadka, godadka ama xitaa jaban.
Sariiraha noocan oo kale ah waxay qofka ka caawinayaan inuu si fiican u seexdo habeenkii, taasoo ka caawisa inay wanaajiso xusuusta iyo kor u qaadida awoodda wax-saarista.
EPONT Introto Conventional Hydraulic Dhalo Jack EPONT, Our alaabta waxaa inta badan loo dhoofiyo in ka badan 30 waddan sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo iwm. baabuurta, forklift iyo mishiinada dhismaha, waxaan horeba iskaashi la yeelannay in ka badan 10 ka mid ah 500 ee shirkadood ee ugu sarreeya adduunka oo ah mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee Shiinaha.
1.We have 4 khadadka wax soo saarka iyo 2 khadadka wax soo saarka kulaylka, Jack dhalada hal maalin laga yaabaa in aan soo saaro oo ku saabsan 5000pcs, oo ku saabsan jaakadda sagxada laga yaabaa in aan soo saaro 500pcs.
2.Shirkaddu waxay dabooshaa aag 17000 mitir oo laba jibbaaran, shirkaddu waxay qaadanaysaa "sumcadda ku salaysan, tayada ugu horreysa" falsafada ganacsiga, si ay macaamiisha u siiyaan alaab tayo leh, si tartiib tartiib ah, oo ah sameynta sumcad wanaagsan ee warshadaha, miisaanka ganacsiga ayaa sii kordhaya. YIPENG rumayso ku biiristaada, waxaa jiri doona bari ka wanaagsan, rumayso YIPENG, dooro YIPENG, ku biir YIPENG, waxaanu ku siin doonaa adeega iyo dammaanadda ugu fiican.
4.Our alaabta waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 dal sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo etc.Our macaamiisheeda waxaa ka mid ah macaamiisha OEM badan oo ku takhasusay tareenka, baabuurta, fargeeto iyo mishiinada dhismaha. Waxaan horeyba iskaashi ula yeelanay in ka badan 10 ka mid ah 500 ee shirkadood ee ugu sarreeya adduunka oo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu waaweyn ee Shiinaha.
Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2006. Taas oo ku taal bartamaha magaalada Yangtze webiga delta dhaqaalaha magaalada, Jiaxing, halkaas oo ku dhow Shanghai, Hangzhou, Ningbo, Suzhou magaalada, iwm . Shirkaddu waa ururin noocyo kala duwan oo Injineer ah, Dabaqa Jack 3T, Gudbinta Dabaqa Jack kaas oo ah shirkad jidheed oo ku takhasustay cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta. Shirkaddu waxay daboolaysaa aag ah 17000 mitir oo laba jibbaaran, shirkaddu waxay qaadanaysaa "Reputation ku salaysan, tayada ugu horreysa" falsafada ganacsiga, si ay macaamiisha u siiyaan alaab tayo leh, si tartiib tartiib ah, abuurista sumcad wanaagsan ee warshadaha, miisaanka ganacsiga ayaa sii kordhaya. YIPENG rumayso ku biiristaada, waxaa jiri doona bari ka wanaagsan, rumayso YIPENG, dooro YIPENG, ku biir YIPENG, waxaanu ku siin doonaa adeega iyo dammaanadda ugu fiican. Epont mechanical waa ururinta wiishashka kala duwan ee Engine, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack kaas oo ah shirkad u gaar ah cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta.1. Waxaan leennahay shahaadooyinka: Waxaan haynaa shahaado rasmi ah2. TECHNOLOGY wax-soo-saarka: cilmi-baaris joogto ah iyo hal-abuurnimo3. Ku qanacsanaanta MACMIILKA: Bixi badeecad lagu qanco.
Waxaan ku saleysannahay Zhejiang, Shiinaha, ka bilow 2006, iibinta Koonfur Bari Asia (15.00%), Afrika (15.00%), Bariga Dhexe (10.00%), Bariga Yurub (9.00%), Waqooyiga Ameerika (8.00%), South America (7.00%),Koonfurta Yurub(7.00%),Bartamaha Ameerika(6.00%),Koonfurta Aasiya(6.00%),Waqooyiga Yurub(5.00%),Suuqa Gudaha (5.00%), Bari Asia(3.00%), Galbeedka Yurub( 3.00%), Badweynta (00.00%). Guud ahaan waxaa xafiiskayaga jooga 51-100 qof.
Dhalo Haydarooliga ah,Jaakadda Dabaqa Haydarooliga,Crane Injineer,Maqas Jack,Masxafka Dukaanka
Epont waxay ka gudubtay ISO / TS16949: 2009, ISO9001: 2015 shahaadada nidaamka maaraynta tayada, waxay si buuxda u fulisay nidaamka maaraynta tayada, waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta deegaanka, jacks-yadu waxay ka gudbeen CE, GS& shahaado TUV
Shuruudaha keenista la aqbalay: FOB;
Lacagta Bixinta La Aqbalay:USD,EUR;
Nooca Lacag-bixinta La Aqbalay: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;